How to Jailbreak( Semi tethered ) iOS 5,5.0.1 with Redsn0w 0.9.9b9d. — MYSTERY ZILLION
How to Jailbreak( Semi tethered ) iOS 5,5.0.1 with Redsn0w 0.9.9b9d.
December 2011 edited December 2011 in iPhone
ကျွန်တောဒီ jailbreak လုပ်တာအောင်မြင်ဖို့ တော်ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ ခုအခြားသူတွေကျွန်တော့လောက်ဒုက္ခမများပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒါရေးတာပါ။
ကျွန်တောဒီလိုစာတွေသိပ်မရေးတတ်ပါဘူး။ ဖတ်ကြည့်ရုံနှင့်သိနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောပြတာပါ။ တကယ်တတ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။
<b>iPhone 4s နဲ့ iPad2မရပါဘူး။</b>
အခု jailbreak လုပ်ပေးမယ့် software က <b>beta version</b> ပဲရှိပါသေးတယ်။ အရင်ဆုံး tethered jailbreak အကြောင်းပြောရအောင်။ tethered jailbreak ဆိုတာကတော့ jailbreak လုပ်ပြီးပေမယ့် reboot လုပ်တိုင်း Redsn0w နဲ့ function တွေပြန်ထဲ့ပေးရပါတယ်။ အဲ...အဲ့လိုမလုပ်ဘဲ reboot လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ jailbreak function တွေ သုံးမရတော့ပါဘူး။ ပြန်ထည့်ပေးရပါမယ်။
ခု Semi tethered jailbreak ဆိုတာကတော့ jailbreak လုပ်ပြီးပေမယ့်ပိတ်ပြီးဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ jailbreak ရဲ့ function အနည်းငယ် သုံးရမှာပါ။ function အပြည့်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ computer ကနေ Redsn0w နဲ့ function တွေပြန်ထဲ့ပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါကကျွန်တော်နားလည်ထားတာပါ။ မရှင်းဘူးဆိုရင်တော့ဖြင့် Google မှာဘဲရှာကြည့်ပါတော့။ http://goo.gl/uw74N
အင်တာနက်ကော်နက်ရှင်ကောင်းကောင်းလိုပါမည်။ CDMA လောက်နှင့်မရပါ။ jailbreak လုပ်တုန်းတစ်ခါဘဲလိုပါသည် OR ios5or 5.0.1 firmware လိုပါသည်။
၁. <a href="https://sites.google.com/a/iphone-dev.com/files/home/redsn0w_win_0.9.9b9d.zip?attredirects=0&d=1">Redsn0w 0.9.9b9d</a> ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။
၂. Redsn0w ကိုဖွင့်ပါ။
၃. Jailbreak Button ကိုနှိပ်ပါ။
၄. iDevice စက်ပိတ်ပါ။ ပြီးရင် next ကိုနှိပ်ပါ။
၅. iDevice ရဲ့ Power button ကို ၃ seconds လောက်နှိပ်ထားပါ။ Power button ကိုမလွှတ်ဘဲ Home (bottom center) button နဲ့အတူ 10 seconds လောက်နှိပ်ထားပါ။ Power button ကိုလွှတ်ပြီး Home button ကိုဆက်နှိပ်ထားပါ။ jailbreak စလုပ်ရင် Home button ကိုလွှတ်လိုက်လို့ရပါပြီ။
၆. ကြားမှာရွေး စရာတစ်ခု ပါပါတယ်။ install cydia ကို အမှန်ချစ်ပြီးnext လုပ်ပါ jailbreak ပြန်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
၇. jailbreak ပြီးသွားပါက tethered jailbreak ရပါပြီ။ Redsn0w ကိုပြန်ဖွင့်ပါ။ Extras Button ကိုနှိပ်ပါ။ Just boot( boot tethered) button ကိုနှိပ်ပါ။
<b>Note:</b>tethered jailbreak ဆိုရင် ဒီအဆင့်ကို စက်ပိတ်ပြီးတိုင်းလုပ်ရပါမယ်။
၉. အဆင့် ၅ အတိုင်းပြန်လုပ်ပါ။ ပြီးပါက tethered jailbreak အတိုင်းသုံးရပါပြီ။
ဒါကတော့ Optional ပါ။ Semi tethered ဖြစ်သွားအောင်ဆက်လုပ်ပါမယ်။
Cydia ကိုဝင်ပါ။ Manage>Soruce>Edit>Add>http://thebigboss.org/semitether ကိုထည့်ပါ။
SemiTether Cydia package ကိုရှာသွင်းပါ။ ပြီးရင် reboot လုပ်ပါ။ boot tethered ပြန်လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ Semi tethered လုပ်ပြီးပါပြီ။
မရှင်းဘူးဆိုရင်တော့ <a href="http://www.ijailbreak.com/how-to/jailbreak-ios-5-0-1-on-ipod-touch-with-redsn0w-0-9-9b9-windows/">ဒီမှာ</a>သွားကြည့်ပါ။ ပြောပြထားတာအရမ်းရှင်းပါတယ်။
၁. Cydia ဟာဖြူနေတယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ဆင့်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ boot tethered လုပ်လိုက်ပါဦး။
၂. Cydia ရဲ့ Soruce Add မလို့လုပ်တိုင်း Search မှာရှာမယ်လုပ်တိုင်း ထွက်သွားရင်တော့ International ထဲက Language နဲ့ Region Format ကိုညှိလိုက်ပါ။
ဥပမာ. Language ကEnglish ဆိုရင် Region Format က United States။
ဒုတိယပြဿနာကြောင့်ကျွန်တော် တော်တော်ကြီးဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါတယ်။အခု( thanks to you <a href="http://joewong.blogspot.com/2011/12/fix-cydia-crash-problem-after-jailbreak.html">JoeWong Blog</a> )ကြောင့်အဆင်ပြေသွားခဲ့ပါပြီ ။ ဟူး.....
Crack application တွေသွင်းဖို့ ဆိုရင် AppSync သွင်းရပါမယ်။
http://i-funbox.com ကနေ ifunbox ကိုဒေါင်းပါ။
cydia.hackulo.us ကိုသွားပါ။ Access Denined ဆိုရင်တော့ http://droidlov3r.appspot.com/cydia.hackulo.us ကိုသွားပါ။
appsync50 (1.0.2), appsync50plus (2.2), sourcegui (1.2) တွေဆွဲပါ။
Cydia ကနေ iFile သွင်းပါ။
ifunbox ကနေတစ်ဆင့် Raw File System>var>mobile> သွားပြီး folder အသစ်ဆောက်( မဆောက်ချင်လဲရပါတယ်။ ) ပြီးအဲ့ file တွေထည့်ပါ။
ပြီးရင် iFile ကနေ ခုနကဖိုင်တွေထဲက sourcegui ကိုသွင်းပါ။ ပြီးတော့ appsync50 သွင်းပါ။ ဒါဆို Crack application သွင်းလို့ရပါဘီ။
အကို kiawtatzaw ပြောတာတွေမှာကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်ပြောပေးတာပါ။
Crack application တွေသွင်းချင်ရင်နောက်ထပ်နည်းလမ်းလေးပါ ။ Jailbreak တော့အရင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ လုပ်ပြီးရင်တော့ Cydia >> Manage >> Sources >> Edit >> Add >> sinfuliphonerepo.com ကိုထည့်ပြီး add နှိပ်ပါ။
Loading တွေလုပ်နေပါလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင် sinfuliphonerepo.com ထဲကိုဝင်ပြီးကိုယ့် version နဲ့ကိုက်တာကိုရွေး Install လုပ်ပါ။ Install လုပ်ပြီးရင်တော့ကြိုက်တဲ့ Crack Game ကိုထည့်ကစားလို့ရပါပြီ။
Example - Version 5.0 or 5.0.1 (Install >> AppSync for iOS 5.x+)
Version 4.0 to 4.3.5 (Install >> AppSync for 4.x+)
ပြီးတော့ အကို kiawtatzaw မှားနေတဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါသေးတယ်။
Semi tethered jailbreak ဆိုတာကတော့ jailbreak လုပ်ပြီးပေမယ့်ပိတ်ပြီးဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ jailbreak ရဲ့ function တစ်ခုမှကိုသုံးလို့မရပါဘူး ။ Jailbreak လုပ်ထားပြီးထည့်ထားတဲ့ Cracked Game တွေလဲဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး ။ Original Application တွေဖြစ်တဲ့ Phone , Photo , Camera , Music , Video etc .... တွေဘဲသုံးလို့ရတာပါ။ Redsnow နဲ့ပြန်နိုးပြီးရင်တော့ Game တွေလဲပြန်ဆော့လို့ရမှာပါ။
dear all fri;
how can i use wifi tethering in iphone4s without JB?
PLs share me all your idea.
cos i like to use 3G network conn; on my laptop.
First you need to open 3G network after that go to "setting" u can see Personal Hotspot Sharing ... it's what u need ... no need to JB...
I don't know how to add ifile from cydia .......
Search iFile in cydia.